बादल पक्षमा देखियो ३ धार : को कसको पक्षमा ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बादल पक्षमा देखियो ३ धार : को कसको पक्षमा ?
साउन १७ गते, २०७७ - १६:१८
छलफलमा ३ धार देखा पर्यो । एक–निशर्त प्रचण्डलाई साथ दिएर जानुपर्छ, दुई–ओलीलाई साथ दिएर जानुपर्छ, तिन– आफ्नै लाईन बनाएर जानुपर्छ भन्ने ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो समय आन्तरिक विवादको भुमरीमा रुमल्लिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनोगत र निरकुंश कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीमा पटकपटक आलोचना भएको थियो ।
ओलीले आफुले अंगालेको गुटगत कार्यशैली सच्याउनुको सट्टा अन्य नेताहरुलाई नै धम्क्याउन थालेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका सचिवालय र स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरुले दुवै पदबाट राजिनामा मागेका थिए ।
ओली पार्टीका सबै तहहरुमा अल्पमतमा परेपछि स्थायी समितिको बैठक राख्नै नमान्ने र राखिहालेपनि बैठकमा उपस्थित नहुने गर्दै आईरहेका छन् ।
पार्टी विवादलाई लिएर प्रचण्ड–नेपाल पक्ष एकाठाउँमा उभिएपनि गृहमन्त्रीसमेत रहेका रम बहादुर थापा बादल भने कहिले ओलीतिर त कहिले प्रचण्डतिर देखिने गरेका छन् ।
थापाले विहिबार आफ्ना समुहका नेताहरुलाई पुल्चोकस्थित सरकारी क्वाटरमा झण्डै ८ घण्टा लामो छलफल गरेको बताइएको छ ।
उनका अनुसार स्थायी समिति सदस्यद्वय देव गुरुङ्, पम्फा भुषाल लगायत गरी २९ जना केन्द्रिय नेताहरुले प्रचण्डलाई साथ दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
यसैगरी लेखनाथ न्यौपानेले भने ओली–प्रचण्ड दुबै प्रवृतिगतरुपमा बेठिक भएकाले आफ्नै लाईन र नेतृत्व स्थापित गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
स्वंयम थापा पनि ओलीमा कम्युनिष्ट चरित्र नै नभएको र उनले प्रतिक्रान्ति गर्ने भएकोले प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्ने मत राख्दछन् । तर उनलाई सुवेदी र दाहालले कतिपय अवस्थामा दुविधामा हाल्ने गरेका छन् ।
दिलकृष्ण प्रजापति भिष्म,रामदिप आचार्य लगायतका युवा नेताहरुले अनिर्णय र अकर्मन्यताको बन्दी बन्न नहुने बताएका थिए । आचार्यले लडाईको बेलामा बिच बस्न नसकिने भन्दै प्रचण्डलाई साथ दिएर जानुपर्ने बताएका थिए ।
साउन १७ गते, २०७७ - १६:१८ मा प्रकाशित